Ny statistikan'ny fizarana tsena PayPal sy ny tantarany amin'ny fanapahana ny fikirakirana ny fandoavam-bola an-tserasera | Martech Zone
Ny statistikan'ny fizarana tsena PayPal sy ny tantarany amin'ny fanapahana ny fikirakirana ny fandoavam-bola an-tserasera
Alatsinainy, Aogositra 3, 2020 Zoma, Martsa 5, 2021 Douglas Karr
Na dia mpankafy an'i Amazon, Affiliate Amazon, ary a aza aho Prime Addict, Tiako koa PayPal. Manana kaonty mahasoa amin'ny PayPal aho, mahazo vola amin'ny fandaniam-bola, ary afaka mametraka fandoavam-bola hafa ho an'ny PayPal Debit Card - tena mety amin'ny orinasa. Androany vao tao amin'ny Sweetwater aho ary te-hividy headphone vaovao amin'ny alàlan'ny PayPal. Nividy azy ireo tamim-pahatsorana tamin'ny alàlan'ny Sweetwater aho noho ny fampidirana PayPal Credit azy ireo. (Hampiako fa tena mahavariana tokoa ireo olona ao amin'ny Sweetwater - Nahazo antso an-tariby mihitsy aza aho avy amin'ny injenieran'ny mpivarotra voatendry aorian'ny fividianana izay miarahaba ahy).
PayPal dia safidy tsy mampino ho an'ny ecommerce satria tsy mitaky ny fandraisan'ny mpivarotra anao rakitra momba ny carte de crédit. Endri-javatra fiarovana tsara izany. Hanampy aho fa misy lafy ratsy amin'ny PayPal, ary izany no rafitr'izy ireo amin'ny fiatrehana ireo fiampangana sarotra. Misy mpiara-miasa amiko iray izay nandoa ny volan'izy ireo, avy eo nanohitra izany, ary tsy nisy fampandrenesana - Navoakan'i PayPal tao ivelan'ny kaontin'ny banky ilay mpiara-miasa aminy. Ny zava-nitranga taorian'izay dia ny fifanolanana teo amin'ny roa tonta. Satria tsy nanana fifanarahana porofom-bala izy dia resy tamin'ny farany na dia nanatitra ny asa aza.
Hatramin'ny taona 2020, ny PayPal dia manjaka an-tserasera miaraka amin'ny antsasaky ny mpizara tsenae. Ity misy fihenan'ny PayPal sy ny mpifaninana aminy:
Mpikirakira fandoavam-bola Isan'ny toerana Zara tsena
mivatra 145,565 18.57%
Fandoavam-bola 18,015 2.30%
Braintree (an'ny PayPal) 17,400 2.22%
Checkout mihazo 15,444 1.97%
Vahaolana Vanco Payment 8,977 1.15%
manamafy 4,261 0.49%
Miverina amin'ny hevitro… Tsy vavahady fandoavam-bola intsony ny PayPal fa manana ny tontolo iainana manokana azy an-tserasera. Miaraka amin'ireo mpampiasa mavitrika 200 tapitrisa, kaonty mpivarotra 16 tapitrisa, ary fifanakalozana 1.7 miliara, #PayPal no rafitra fandoavam-bola an-tserasera lehibe indrindra. Misy ny vondrom-piarahamonina PayPal izay mavitrika ary samy mivarotra amin'ny alàlan'ny PayPal ary mividy irery amin'ny PayPal. Raha tranokala ecommerce ianao, PayPal dia azo antoka fa anisan'ny safidinao fandoavam-bola hividianana tombony amin'ity vondrom-piarahamonina ity.
PayPal dia sehatra Revolisionera nanova ny tontolon'ny asa fanompoana vola. Ity infographic, Ny tantaran'ny fahombiazan'ny rafitra fandoavam-bola an-tserasera lehibe indrindra, mijery ny fomba Paypal nanatrika ny tampon'ny tontolon'ny fandoavam-bola an-tserasera sy ny fomba nitomboany lehibe hatrany.
Ireto misy antontan'isa vitsivitsy miavaka amin'ny PayPal:
Tamin'ny taona 1999, voafidy ho iray amin'ireo hevi-draharaha ratsy indrindra 10 tamin'ny taona i PayPal
PayPal dia manana fitomboana 10% isan-taona raha oharina amin'ny indostria fitomboana 3%
18% amin'ny e-varotra rehetra dia eo am-pelatanan'ny PayPal
Tamin'ny CyberMonday of 2015, Paypal dia nahatratra 450 ny varotra isan-tsegondra
Tags: ecommercestatistikan'ny fandoavam-bola an-tseraserafandoavam-bola amin'ny Internetvavahady fidiranafandoavam-bolapaypaltombony paypalfatiantoka paypalpaypal infographicfizarana tsena paypalstatistikan'ny paypalantontan'isa
Lisitra fanamarinana momba ny fananganana sy ny marketing ny fampiharana findainao
Fampiasana fanandramana mandeha ho azy hanatsarana ny traikefa amin'ny Salesforce
Apr 6, 2021 ao amin'ny 3: PM PM
Hey, Douglas. Nojereko indroa ny angon-drakitrao ny tsenanao ary toa diso hevitra tamin'ny fizarana tsena ianao. Hampifandraisiko eto ilay sary, azonao atao ny manamarina indroa: https://imgur.com/a/dZ9AvOj
Apr 9, 2021 amin'ny 11: 34 AM
Misaotra, Alex! Manana loharanom-pahalalana azoko tondroina ve ianao? Tiako foana ny manome loharanom-pahalalana tahak'izao.